स्मार्ट गाउँ र नगर कसरी बनाउने ? – Pahilo Page
स्मार्ट गाउँ र नगर कसरी बनाउने ?
स्थानीय तहको चुनाव अगाडी स्मार्ट गाउँ र नगर बनाउँने बिषयले अग्रस्थान पाएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलबाट अध्यक्ष तथा मेयरका लागि उम्मेदवारहरूका चुनावी घोषणापत्र र प्रतिवद्धता पत्रमा स्मार्ट गाउँ तथा नगर बनाई दिने कुराले प्रमुखता पाएको थियो। तर, यो स्मार्ट गाउँ र नगर भनेको के हो र कस्तो हुन्छ ? यो कसरी बनाउँन सकिन्छ ? यसको योजना के हो भन्ने सायदै उम्मेदवारहरूले जनतालाई प्रष्ट्याएका थिए। यो प्रचार एउटा चुनाव जित्ने रणनीति बाहेक अरू केहि थिएन भन्दा अन्यथा नहोला। कुरा स्मार्ट गाउँ र नगरको गर्ने तर त्यसको कार्यन्वयनका लागि कुनै योजना नै नबनाउँने भयो भने ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भन्या जस्तै हो।
लेखक हुम सुनारीमगर
४) वैदेशिक रोजगारलाई पनि निरूत्साहित पार्नुपर्छ। यो पेशाले देशै सम्पन्न भएको उदाहरण काँही छैन। यसलाई क्षेणिक अथवा वैकल्पिक पेशाको रूपमा मात्र लिनुपर्छ। देशको जनशक्ति आफ्नै देशको विकासमा लगाउँनु पर्छ। सबै यूवाहरूलाई शिक्षित, दक्ष र निपूर्ण बनाएर स्वदेश मै भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू तथा स्वरोजगारमा लगाउँनु पर्छ। त्यसैले, अब वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन होइन – बिस्तारै निरूत्साहित पार्नुपर्छ।
सबै नेपाली नागरिक दिनमा कम्तिमा ८ घण्टा आफ्नै लागि खट्न सके केहि बर्षभित्र मै देशको विकासमा कायापलट हुनेछ। यसरि बन्ने छ स्मार्ट गाउँ र नगर। सबै स्थानीय तह अथवा ग्रामिण क्षेत्र स्मार्ट गाउँ र नगरमा परिणत भए सिङ्गो देश समृद्ध र सम्पन्न हुनेमा दुईमत छैन। सबै नेपाली नागरिक परिश्रमी, मेहनती,इमान्दारी र उद्येमी बन्न सके स्वयम् आफै सम्पन्न बन्न सकिन्छ। सबै सम्पन्न बन्नसके सिङ्गो देशै सम्पन्न र समृद्ध बन्नेछ।
प्रकाशित मिति : बुधवार, साउन ०४, २०७४ समय : १३:४१:३९ 383 पटक पढिएको